Biti says Zimbabwe has reached tipping point, time to set up transitional … – Zimbabwe Daily
Biti says Zimbabwe has reached tipping point, time to set up transitional …
ZIMBABWE – HARARE—Former Finance Minister and People’s Democratic Party president, Tendai Biti, says Zimbabwe’s political and economic situation has reached a tipping point and the country could slide into chaos anytime.
Crisis in Zimbabwe Coalition director, Philani Zamchiya, also spoke at the dialogue session which was titled “Beyond Mugabe: Unpacking Dynamics of a Transitional Authority”.
He said while Biti correctly painted the Zimbabwean situation, it was not clear how the national transitional authority would be born given the sharp differences among the country’s politicians.
Professor Sabelo Gatsheni–Ndhlovu of the University of South Africa said the positive thing about Biti’s assessment of the Zimbabwean situation is that there are some politicians like him who are working to redress the situation.
Previous PostTendai Biti has respect and high regard for Tsvangirai
Next PostBrokerages Give $28.00 Consensus Price Target to Biotie Therapies Oyj (NASDAQ …
RBZ Has fake PHD
ZIMBABWE - HARARE—Former Finance Minister and People's Democratic Party president, Tendai Biti, says Zimbabwe's political and economic situation has reached a tipping point and the country could slide into chaos anytime. Biti says only a transitional a...